Global Voices teny Malagasy » Ny Dia Lavitr’ezak’i Rayman, ilay Olom-pirenena Tsotra Ao Hong Kong, Mpakasary Fanao An-Gazety Nahazo Loka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Novambra 2014 2:58 GMT 1	 · Mpanoratra inmediahk.net Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara
Natao tao amin'ny trano fivarotam-boky tao Mongkok ilay tafatafa, zara raha misy arabe iray manasaraka azy amin'ny iray amin'ireo toerana fanaovan'ireo mpiaro ny demôkrasia fitokonana mihitsy, toerana “mafana tokoa” araka ny filazan'ireo mpitandro filaminana ao Hong Kong azy. Ora vitsivitsy talohan'ilay tafatafa, nisy vondron-dehilahy hafa nanao saron-tava, nitondra antsy maranitra ankoatr'ireo fitaovana vy hafa nentiny, tonga mba hanala ireo sakantsakana napetrak'ireo mpanao fihetsiketsehana. Nandritra ny tafatafa, nitohy tonga foana ireo hafatra an-tsoratra ombam-panairana hoe toa manomboka manao korontana io hariva io, ireo “fehiloha manga,” vondrona miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana. Toa sahala amin'ny hipoaka foana amin'ny fotoana tsy voafetra ireo fifandirana eo amin'ireo mpomba ny Occupy sy ireo manohitra izany hatry ny 03 Oktobdra, raha nisy vondronà jiolahim-boto mpomba an'i Beijing  nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana miaro ny demôkrasia tany Mongkok.
Araka ny fiteny Shinoa hoe : “Mibaby andraikitra ireo olona teraka tao anatin'ny fotoana mikorontana.” Mipetraka eo amin'ny fikirizan'ny mpanao fihetsiketsehana tsirairay ilay Hetsika Elo (Umbrella Movement). Rayman, mpitati-baovao an-tsitrapo ao amin'ny Gazety Sosialy Mitambatra (United Social Press) (USP) , sehatra media amin'ny Aterineto, dia mino fa andraikiny ny mandrakitra ny zava-miseho ao an-toerana fanaovana fihetsiketsehana ao Mongkok amin'ny alàlan'ny fakantsariny.
Tiany ny toetoetra sahala ny an'ilay mpitatitra an'ady, James Nachtwey. Ny sary nalain'i Nachtwey nandritra ny fotoana niasàny no sari-nà fifandirana nanohina olona be indrindra. Toy izao ny fitantaràny ny mombamomba an'i Nachtwey: “Vavolombelona aho, ary izany ireo sary ireo. fijoroako vavolombelona. Tsy tokony hohadinoina ireo fotoana noraketiko, ary tsy tokony hiverina intsony ihany koa.” Milaza  i Nachtwey fa afaka manova ny tany ny fitambaran'ny sary fanadihadiana nataony. Mizara ny finoany i Rayman fa amin'ny fifandimbiasan'ny tara-pahazavana sy ny aloka, raha tsy miraharaha ny olona sy ny fiarahamonina ilay mpaka sary, zava-poana ihany ny zavatra alainy, na dia eo aza ny hatsaran'ny hazavana sy ny zoro hakàny azy. Ny vahoaka no ivon'ny sary.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/25/65525/
 mpomba an'i Beijing: https://globalvoicesonline.org/2014/10/03/pro-democracy-protesters-accuse-hong-kong-police-of-allowing-thugs-to-attack-them/
 United Social Press) (USP): http://www.unitedsocialpress.com/